Currency wokutengesera. Currency wokutengesera musi MICEX
Foreign mari iri Currency manotsi zviri pamutemo nyoro weHurumende. Exchange kwavo mumwe rinoitwa mugadziriro currency pamusika, dzinova hurongwa zvoupfumi ukama pakati nemabhengi vatengi vavo, vatambi kwounyanzvi uye ehurumende nemasangano. kutenga uye Kutengeswa kwema dzazadziswa chete mune isiri mari fomu.
Currency zvokutengeserana anogona kuitwa zviviri: pamusoro yakarongwa uye OTC pamisika.
OTC kwema zvakananga pakati mutengi uye mutengesi mari. Kazhinji, izvi basa zvebhizimisi mabhanga. Uye vanogona kuita kuti zveefa pamusoro pachangu kwavo uye nokuda kwavo pachavo zvavanoda, uye kumirira zvido vatengi. The mutengi uye mutengesi ari weboka Nhaurirano kuona zvinhu rwokutenga uye kutengesa dzimwe mari, izvo zvinosanganisira mari, zviri Gengi, mashoko uye zvarayirwa muripo. Chimwe chinhu chinokosha kutengesa pamusoro OTC pamusika ndechokuti mativi kutora mamwe njodzi (kubva chero vavo chero nguva kusiya ayo wazvipira), saka akavhiyiwa aya kunze pakati shamwari vanovimba mumwe.
Takarongwa mari musika
The mukutsinhana zvakaenda ari vatorwa mukutsinhana musika anoratidza kuvapo bato wechitatu, kureva murongi zvakaenda - Currency Exchange. Muchiitiko chino, sezvo Nhaurirano zvakadai pakati mutengi uye mutengesi. Mumwe nomumwe wavo zvinotora pamusoro Exchange chikumbiro pamwe chinoratidza ngaakuitirei inoenderana navo. Kana pane imwe nguva nezvido mutengi uye mutengesi ndiwo chete, kuvhiyiwa rinoitwa kwaita. Exchange kwete nyore chete zvikuru muitiro tagutsikana kwema, asiwo mhando rubatso. Saka, kana mutengi kana mutengesi hazvina basa anoita rechipiri bato. The kutengeserana kupera chete kana mumwe nomumwe nhengo waro dzaidzidziswa anodiwa chitsama kuMudzidzisi mari.
Chance uye zvimwe zvaungaita kwacho, kana kwakadzama pakati mapato vari zvakananga uye kubhadhara zvose napakati Stock Exchange. Izvi zvinoitwa kuitira kubvisa ngozi default nomumwe mapato pakumanikidzwa kwavo pasi kutengeserana.
MICEX: munhoroondo chiitiko
The Moscow Interbank Currency Exchange Nde zvokutengeserana papuratifomu muRussia. The Kuronga MICEX boka rinosanganisira wemari uye chinokosha exchanges, kuti MICEX Kubvisa marara Center, National panodonedzerwa uye remunharaunda ugari nzvimbo.
MICEX rakaumbwa muna 1992. Foreign mukutsinhana kuvhiyiwa kubva pakutanga kwayo chikuru basa. Section wemari zvokutengeserana, chisungo, chinokosha uye rinobva zviridzwa yaiitwa kunonoka.
Pakupera 2011 paiva kwemapazi maviri nzvimbo Russian pamusika wemari - MICEX uye RTS. mamiriro uhwu hwakatanga ainzi Moscow Exchange. Sezvo mari dzokutengeserana pamusoro MICEX rakaitirwa mukati yechinangwa rimwe kuchinjana nzvimbo.
Technical shanduka kupinda dzimwe Exchange kwema
Pakutanga, zvokutengeserana pamusoro MICEX vaiva muchimiro Auktionen. Vanonzi "bhuroka" kuunganidza vachiriita kubva vatengesi nevatengi vane chiratidzo uwandu vatorwa mari uye Gengi. Zvino akabata makwikwi, migumisiro iyo kusarudza vakundi.
Kubva June 2, 1997 mari dzokutengeserana pamusoro MICEX yaiitirwa electronic zvokutengeserana hurongwa (SELT). Rakanga wokutanga SELT gadziriro yakadaro zvokutsinhanisa pawaitengesa Russia. Chokwadi ichi chaiva echimurenga budiriro mumunda chehurongwa kutengeserana. Uchibatsirwa kwayo, vatengesi nevatengi vakakwanisa kupinda imwe risingaperi uwandu kwema panguva zvokutengeserana yose chidzidzo nguva chaiyo.
Kwema pamusoro MICEX
MICEX akavhiyiwa zvinoitiswa kubudikidza yemagetsi zvokutengeserana hurongwa. Zvarinoreva iri pakuti imwe neimwe yeboka ichizviisa wemagetsi chikumbiro inotaridza uwandu yakatengwa kana vakatengesa mari, uye mutengo ari izvo vachida kuita zvakawanda. Ivo vose vauye rimwe ino. Apo mafomu maviri kuritenga uye kutengeswa mitengo ndiwo chete, vari akaurayiwa muna otomatiki nzira. The Vhoriyamu ngaakuitirei akaenzana vhoriyamu maduku mirayiro miviri executable.
Mutsindo zvikumbiro kuti dzave queued, anogona kubviswa chero nguva, kana ukaisa wake bato anoda kuchinja zvinhu.
It SELT anogonesa mari zvokutengeserana munguva chaiyo. Fielding, nadzurudzo uye Kudzimwa kwechikwereti mirairo uye kwema panguva ano Exchange vari kuderedzwa kuti nyore kubatwa munhu bhatani. Nokuti zvimunakire zvevanhu hwakaratidza mirayiridzo hwakaratidzwa pamusoro pakombiyuta. Izvi zvinobvumira kuti vaongorore mamiriro kumusika uye kufanotaura ayo zvichibvira mirayiridzo.
Murayiro aurayiwe zvigadzirwa mirairo
Kana bhidha mutengo hazvirevi dzinoenderana kuitika pamwero, zvino rinobva pfungwa dzinotevera:
Kuti kushanda kutenga dzimwe mari. Kana mutengo wayo pazasi pamusika ano, zviri queued uye vachaitwa akaurayiwa kana zvakadzokororwa achadonha kune pamwero. Kana apa - zviri akaurayiwa pamusika.
For zvikumbiro wokumwe mari kutengeswa. Kana mutengo waro pazasi kumusika zvazvingava, chichagamuchirwa akasangana panguva ano akatorwa. Kana pamusoro - achaparadzwa queued kusvikira nguva yakadai kukosha currency rukasafashukira kusvika pamwero raanotaura kushanda.
Currency zvakaenda zvinoitiswa maererano kutenderwa papurogiramu. Kwema ne "nhasi" iri dhora-Ruble vaviri vari nguva kubva maawa 10:00 kusvika 17:15 Moscow nguva, peya euro-Ruble - kubva 10:00 kusvika 15:00 Moscow nguva. Ndakawonekana namajoko (the Belarusian Ruble, ari Kazakh Tenge, Ukrainian Hryvnia uye Chinese Yuan) vakabata awa rimwe chete, kubva 10 kusvika 11 pm Moscow nguva.
MICEX anopawo vatori vechikamu mukana kupinda kwema vari dzinonzi non-systemic kwadzinoita kwema. Ivo sangana zvinhu zvokutsinhanisa uye OTC pamisika. Party kuti kutengeserana zvakananga taurirana ose ezvinhu ayo. Asi kuritenga uye Sale kwema vari munharaunda zvigadzirwa exchanges. The mutengi uye mutengesi akaisa Kero chikumbiro. Iva bato pazviri wechipiri kungava chete chairo ubatanidzwe, uko iye pachena. Mhedziso zvakadaro zveefa vose Currency vaviri vaviri zvinogoneka kusvikira 23-50 Moscow nguva.
Kukosha chehurongwa mari musika
Takarongwa mari dzokutengeserana, ari MICEX nzvimbo kuita rinokosha mabasa.
Chokutanga, achibatsirwa wavo, munhu wose anogona mubasa Pricing kwacho. Kuti tidaro may nyanzvi ubatanidzwe akapiwa mbune kutengesa, uye zvachose wose asina kusvika nyika rezvemari chero nzira. Kuti aite izvi, anofanira kupinda chibvumirano imwe bhuroka ane mbune kuti Stock Exchange MICEX. Muchiitiko chino, zvichataurirana kumiririra zvido nemhosva yake.
Chechipiri, musimboti bhengi sechinhu voruzhinji simba anokonzera murau mumunda mari mutemo ane simba pamusoro kuitika Gengi National mari, izvozvo apindira pazvinhu kuumbwa zviri MICEX nzvimbo. Uyezve, dzimwe nyika kuchinjanisa zvokutengeserana zvabuda vanobviswa paunoronga wakateya Bank of Russia mukuru Gengi pamusoro Ruble.
MICEX ndiko, pasina kupamhidzira, huru yacho Russian Exchange musika. MICEX mari zvokutengeserana tiri mumwe zviridzwa wehurumende mari nehurumende. Hazvina papuratifomu ichi anopa ayo mugovane mukana kupinda kwema munguva chaiyo. Bhuku Currency zvakaenda vari kuramba kukura. Muna 2002, ivo vakasvika $ 65 billion muna 2008 - .. $ 2.7 matiririyoni muna 2014. chete January nhamba yakanga anopfuura 13 tiririyoni rubles.
Kukumbira mashoko - nayo ... Kubuda kukumbira mashoko. Kukumbira mashoko pamusoro 44 Federal Law
Gel - Georgian mari
Armenia National mari: nhoroondo chidzoke uye chitarisiko
10 mari zvikuru zvinodhura munyika, mari
Coins Armenia: nhoroondo
Vietnam kuti mari, nhoroondo yacho, uye aizviti Gengi
Munhu wose anofanira kuziva: GDP - ndizvo
Nzira Yokurwa NaEdema
Property mutero kuchinja uye pfuma mutero
Kwavabereki Control nokuti "Android". vakasununguka nevabereki kuzvidzora chirongwa
"Kviks" mishonga mumiririri. Mirayiridzo yokushandisa
How yokusima cheshanu? Tips uye mazano
Popular Restaurants Tver
Outline pakati penzura - danho rokutanga kune kukura zvakanaka hwemashiripiti
Chii zaklichka? yeshoko rokuti
Recipe zucchini ragout: zvokudya utano rimwe zuva
How kuponesa kushandisa mumeporo shizha?